Manampy ny Tra-boina ve ny Vavolombelon’i Jehovah? | Fanontaniana
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Asamey Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Boligara Bosniaka Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cinghalais Dangme Danoà Digor Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Féroïen Ga Galicienne Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kabyle Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Mazateky (Huautla) Mende Mingrelian Mixe (Afovoany) Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotonga Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soli Soundanais Swahili Swati Sãotomense Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tankarana Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tsonga Turkmène Twi Tzotzil Télougou Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Wallis Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Eny. Matetika ny Vavolombelon’i Jehovah no manampy ny tra-boina. Ampianay daholo na ny Vavolombelona na ny olon-kafa, satria ampiharinay ilay toro lalan’ny Baiboly ao amin’ny Galatianina 6:10 hoe: “Aoka isika hanao soa amin’ny rehetra, indrindra fa amin’ny mpiray finoana amintsika.” Miezaka koa izahay mba hampahery an’ireo tra-boina sy hanampy azy ireo hanana finoana matanjaka, satria izany no tena ilain’izy ireo.—2 Korintianina 1:3, 4.
Fomba andaminana an’ilay fanampiana
Aorian’ny loza, dia miantso na manatona an’ireo olona eo anivon’ny fiangonana ao amin’ny faritra niharan-doza ny anti-panahy. Izany no ahafantarany hoe tsy misy maninona ve izy ireo ary inona no mety hilainy. Ny anti-panahy avy eo no mampita ny vaovao any amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Lazain’izy ireo koa hoe inona no fanampiana vonjimaika efa natao.
Raha tsy mahavita misahana ny fanampiana ireo fiangonana ao amin’ilay tany, dia mandamina ny fomba anampiana azy ny Filan-kevi-pitantanana. Toy izany no nataon’ireo Kristianina voalohany, tamin’ny fotoana nisian’ny mosary. (1 Korintianina 16:1-4) Manendry Komitin’ny Vonjy Rano Vaky ny biraon’ny sampana, mba handamina sy hitarika an’ilay fandaharam-panampiana. Misy Vavolombelona avy any an-tany hafa koa mahafoy vola sy fotoana mba hanampiana.—Ohabolana 17:17.
Ny fanomezana an-tsitrapo voarain’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah no akana mba hanampiana ny tra-boina. (Asan’ny Apostoly 11:27-30; 2 Korintianina 8:13-15) Koa satria mpiasa an-tsitrapo ireo olona mitondra fanampiana, dia tsy lany mba hanakaramana azy ireo ny vola fa atokana manontolo amin’ilay fanampiana. Ampiasainay tsara ireny fanomezana voarainay ireny.—2 Korintianina 8:20.
Hizara Hizara Manampy ny Tra-boina ve ny Vavolombelon’i Jehovah?